कानूनको प्रयोगमा बदनियत : कसुर एउटा अभियोग अर्कै - CIJ Nepal
एउटा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई नियतवश अर्कै अभियोग लगाएर अदालतबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम कसरी भइरहेको छ ? ‘नक्कली चिकित्सक प्रकरण’ मा प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिलका बदनियतपूर्ण कार्यहरूको खुलासा ।
-कृष्ण ज्ञवाली: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
तीन वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले देशभर नक्कली डाक्टरको बिगबिगी बढेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, रूपन्देही, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सीआईबीले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेका थिए । त्यसक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा बारम्बार असफल भएका विद्यार्थीहरूको सूची केलाउँदा करीब एक हजारको शंकास्पद सूची तयार भयो । जसमध्ये अधिकांशले एमबीबीएस अध्ययन गर्नुअघि पेश गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्रले उनीहरू भारतमा पढेको तथ्य खुल्यो । अनि, काउन्सिलले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सीआईबीको सहयोग लियो ।
चिकित्सकहरूको पेशागत आचरणको वकालत गर्दै आएका डा. सुशील कोइराला “सम्बन्धित कसुरमा कानून अनुसार कारबाहीको माग नगरेर अर्को मुद्दा लगाउनु प्रकारान्तरले उन्मुक्ति दिनु हो” भन्ने ठान्छन् । कोइराला भन्छन्, “यो त लाइसेन्स नभएको सवारी चालकले यात्रुलाई ठक्कर दिंदा ठगी मुद्दा चलाएजस्तै भयो ।” “नक्कली प्रमाणपत्रबाट मेडिकल शिक्षा पढेर लाइसेन्स लिनेको संख्या अनुमान गरेभन्दा धेरै छ” डा. कोइराला भन्छन्, “विडम्बना, नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल नै पेशागत संगठनजस्तो संरक्षकको रूपमा देखा प¥यो ।”
admin April 22, 2018	nepali-posts No Comments »